China Cuttable Heat Transfer Flock vagadziri uye vatengesi |Alizarin
Dhaunirodha & FAQs
Ink Jet Transfer Pepa
Ink Jet Transfer Pepa (Iron-On)
Ink Jet Transfer Pepa (yakatemwa tafura)
Yakakura Format Ink Jet Transfer Pepa (cheka tafura)
Color Laser Transfer Pepa
Eco-Solvent Inodhindwa Flex
Eco-Solvent inkjet midhiya
Mapurinda Akatenderwa Kugovera
Zita reChigadzirwa: Cuttable Heat Transfer Flock
Product Code: CCF-Flock
50cm X 15M, 50cm X5M/ Roll,
zvimwe zvinodiwa zvinodiwa.
ese akajairika ekucheka plotters, akadai
Graphtec FC8600, CE6000,CE6000-F-Mark,CE LITE-50,Silhouette CAMEO,GCC-China RX II, Jaguar V, Puma IV, Nyanzvi II, AR-24, i-Craft nezvimwe.
Cuttable Heat Transfer Flock imhando yemhando yepamusoro yekupisa viscose makwai yakavakirwa papolyvinyl chloride firimu, ine kupenya uye magadzirirwo nekuda kwehupamhi hwefiber density, inogadzirwa zvinoenderana neEN17 chiyero, Cheka tafura Flock yakavakirwa polyvinyl chloride firimu rine inopisa inonyunguduka inonamatira papolyester firimu. mutsetse, Yakanakisa yekucheka uye weeding zvivakwa.Kunyangwe yakadzama logos uye yakanyanya kudiki mabhii akachekwa tafura.Innovative hot melt adhesive inokodzera kuendesa pamachira sedonje, musanganiswa wepolyester/donje uye polyester/acrylic, Nylon/Spandex etc. Cuttable Heat Transfer Flock inogona kushandiswa kudhinda pamaT-shirts, mitambo & yekutandara kupfeka, mayunifomu, kuchovha bhasikoro. kupfeka uye zvinyorwa zvekusimudzira.
Cuttable Heat Transfer Flock inogona kushandiswa kunyora maT-shirts, mitambo & yekutandara kupfeka, mabhegi emitambo uye zvinyorwa zvekusimudzira.uye inogona kuchekwa nevose varipo vanoronga.Isu tinopa zano kushandisa banga 30 °.Mushure mekusakura iyo yakatemwa flex film inotamiswa nekupisa press.Cheka tafura Flock ine inonamira polyester firimu, inogonesa reposition.
■ Gadzirisa machira neanofarira akawanda-mavara magirafu.
■ Yakagadzirirwa mhedzisiro yakajeka pamachira akasviba kana akajeka-mavara kana machira anosanganiswa edonje/polyester
■ Yakanakira kugadzirisa maT-shirts, mabhegi ecanvas, maapuroni, mabhegi ezvipo, mapedhi emakonzo, mapikicha ari pamachira nezvimwe.
∎ Simbi inobatika nesimbi yemumba yenguva dzose & nemichina yekutsikirira kupisa.
■ Yakanaka inogezeswa uye chengetedza ruvara
■ Yakanyanya kuchinjika uye yakawedzera elastic
Cuttable Heat Transfer Flock inogona kutemwa neakajairika kucheka marongero akadai se: Roland CAMM-1 GR/GS-24,STIKA SV-15/12/8 desktop, Mimaki 75FX/130FX series,CG-60SR/100SR/130SR,Graphtec CE6000 nezvimwe.
Iwe unofanirwa kugara uchigadzirisa kudzvanywa kwebanga, kucheka kumhanya zvinoenderana nezera rako reblade uye Yakaomeswa kana saizi yemavara.
Ongorora: Iyo yepamusoro tekinoroji data uye kurudziro yakavakirwa miedzo, asi yedu mutengi anoshanda nharaunda,
kusadzora, isu hativimbise kushanda kwavo, Usati washandisa, Ndokumbira kuti utange bvunzo yakazara.
■ Gadzirira nzvimbo yakagadzikana, isingapise kupisa yakakodzera kuaina.
∎ Preheat iron kusvika pa<wool> setting, inokurudzirwa tembiricha yekuayina 165°C.
■ Isai jira muchidimbu kuti muone kuti rakanyatsotsvedzerera, moisa bepa rekutamisa pariri mufananidzo wakadhindwa wakatarisa pasi.
■ Usashandise basa reutsi.
■ Iva nechokwadi chokuti kupisa kunofambiswa zvakaenzana munzvimbo yose.
■ Sinira bepa rekutamisa, uchimanikidza zvakanyanya sezvaunokwanisa.
∎ Pakufambisa simbi, kumanikidzwa kushoma kunofanirwa kupihwa.
■ Usakanganwa makona nemacheto.
■ Ramba uchiaina kusvikira wanyatsoronda mativi emufananidzo.Izvi zvese zvinofanirwa kutora anenge 60-70 masekonzi kune 8"x 10" mufananidzo wepamusoro.Tevedzera nekuaina chifananidzo chese nekukurumidza, uchidziya ese ekutamisa bepa zvakare kweanenge 10-13 masekonzi.
■ Peta firimu rekumashure kutangira pakona mushure mekuita ironing.
7.Heat press transfering
■ Kuisa kupisa muchina 165 ° C kwemasekonzi 15 ~ 25 uchishandisa kumanikidza kuri pakati nepakati.iyo press inofanira kuvharwa yakavharwa zvakasimba.
■ Dzvanya muchidimbu jira racho 165°C kwemasekonzi mashanu kuti uone kuti rakanyatsotsetseka.
■ Isa bepa rekutumira pariri mufananidzo wakadhindwa wakatarisa pasi.
■ Dhinda muchina 165 ° C kwemasekonzi 15 ~ 25.
■ Peta firimu rekumashure uchitangira pakona.
Geza mukati neMvura inotonhora.USASHANDISA BLEACH.Isa muomesi kana kuti sungirira kuti uome pakarepo.Ndokumbira usatambanudzire mufananidzo wakatamiswa kana T-shati sezvo izvi zvichigona kukonzera kutsemuka, Kana kutsemuka kana kuunyana kuchiitika, ndapota isa bepa remafuta euchapupu bepa pamusoro pekutamisa uye kupisa muchina kana simbi kwemasekonzi mashoma uchiita shuwa. dzvanya zvakasimba pamusoro pekutamisa kwese zvakare.
Ndapota yeuka kusaaina zvakananga pamusoro pemufananidzo.
Material Kubata & Kuchengeta: mamiriro e35-65% Relative Humidity uye pakudziya kwe10-30°C.
Kuchengetedzwa kwemapakeji akavhurika: Kana mapakeji akavhurika emidhiya asiri kushandiswa bvisa roll kana mashiti kubva kuprinta anovhara roll kana mashiti ane bhegi repurasitiki kuti uzvidzivirire kubva kune zvinosvibisa, kana urikuzvichengeta pakupedzisira, shandisa plug yekupedzisa. uye tepi pasi kumucheto kudzivirira kukanganisa kumucheto kwepumburu usaisa zvinhu zvinopinza kana zvinorema pamapumburu asina kudzivirirwa uye usazviturikidza.
Zvakapfuura: Eco-Solvent InkJet Transparent Firimu
Zvinotevera: Eco-Solvent Ink Jet Backlit Firimu
Inocheka Kupisa Kuendesa PU Flex Premium
Inocheka Kupisa Kuendesa PU Flex Regular